Iyini i-vithamini equkethe amafutha yemifino?
Umbuzo wokubaluleka kwamafutha yemifino awufanelekile: usizo lwawo luhloswe ukuthi amafutha emifino anezivithamini ezinomphumela omuhle emzimbeni womuntu.
Iyini i-vitamin equkethwe ngamafutha omifino futhi inzuzo yayo?
Okokuqala, ake sikhumbule ukuthi umthengisi wamafutha anjalo akuyona nje ilanga lokushona kwelanga, kodwa futhi neminqumo, ummbila, amantongomane, udlwengulo, ifilakisi kanye nezinye izinhlayiya zamafutha.
Kodwa-ke, cishe noma yikuphi amafutha yemifino anezinhlobo ezinjalo zamavithamini enikeza inzuzo engavumelekile yokusetshenziswa kwayo:
Okokuqala, ngamafutha omsuka wemifino ayikho i-cholesterol, ngakho-ke ukubhaliswa kwendlela yokuziphatha: "Ayikho i-cholesterol" okufanele ibonakale ngaphandle kokunyakaza kokumaketha;
ukusetshenziswa kwalo kuvimbela ukuthuthukiswa komfutho wegazi ophezulu , kunomthelela ekunciphiseni ukucindezelwa kwegazi;
ukusetshenziswa kwamafutha wemifino ephezulu kunomphumela omuhle esimweni sesimo senhliziyo.
Lapho bethi amafutha yemifino ngumkhiqizo owusizo kakhulu, zama njalo ukuthola ukuthi yikuphi i-vitamin equkethe kakhulu.
Ucwaningo oluningi lubonise ukuthi isisekelo salomkhiqizo wesitshalo yi-vitamin E, ekhona kunoma yiluphi uhlobo lwamafutha. Lokhu kuyi-vithamini ewusizo kakhulu, okukhona kulo mkhiqizo kuvumela ukuba kusetshenziswe imisebenzi yazo zonke izinhlelo zomzimba, ikakhulukazi kunenzuzo esimweni sesikhumba, amazinyo nezinwele.
Nokho, lokhu akukhawulelwanga ohlwini lwezinto eziwusizo zamafutha. Iqukethe i-vitamin PP; ukutholakala kwalo emkhiqizo kunikeza impendulo yombuzo wokuthi i-vitamin eyisisekelo kumafutha yemifino "unomthwalo wemfanelo" womsebenzi wesimiso sezinzwa: yi- vitamin PP , kanye ne-vitamin C, etholakala ngamafutha ngobuningi obukhulu, futhi ivimbela ukubukeka kwe-thrombi, futhi uyakhathalela ukuthi lezi zitsha zaziqinile futhi zinwebeka.
Isakhiwo esiyinkimbinkimbi samavithamini F, A, D, E sinomthelela omuhle emsebenzini we-system cardiovascular and the brain. Lokhu kuvimbela ukubonakala kwe-plaque ye-cholesterol futhi kuyindlela enhle kakhulu yokuvimbela ukuqina kwe-atherosclerosis.
Ukwandisa ukubaluleka kwamafutha omquba, ukutholakala kuwo amafutha e-omega-3 kanye ne-omega-6, okufaka isandla salo amandla, futhi ngakwesinye - ukujwayelekile komgudu wamathumbu nokulahlekelwa kwesisindo.
Kumele kukhunjulwe ukuthi zonke izinto eziwusizo zitholakala kuphela kumafutha angasetshenzisiwe.
Isobho lokudla kwesisindo - imithi
Isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi esisindo sokulahleka - zokupheka
Imikhiqizo ye-blood thinning
Ziyini izinzuzo zamantongomane ephayini ngobuhle nempilo?
I-cocktail i-cocktail yokunciphisa
Ukudla okuwusizo kakhulu
I-hydrogen peroxide yokulahlekelwa isisindo
Ingabe Abadliwayo Badla Inhlanzi?
Iziphuzo zamandla - umthelela weziphuzo zamandla emzimbeni womuntu
Iklabishi brine - okuhle nokubi
Amalenti aluhlaza - okuhle nokubi
Okuqukethwe kwe-lavash - ikhalori
Ukushisa kwe-air for apartments
Ukubheka kusuka ku-Victoria Boni
Terrace kuya endlini
Indlela yokupheka irayisi?
Isithombo esidayiswayo uju ngokukhwehlela ngesikhathi sokukhulelwa
I-zucchini enezinyosi nelayisi
Ingane ikhwehlela phezulu
I-Adjika kusuka e-chili pepper ebusika
Amathrendi - ekwindla-ebusika 2015-2016
Wedding on Apple igcinwe - izimpawu
Impande ye-Licorice - izakhiwo zokwelapha nokuphikisana
Ama-Nuggets - zokupheka ngesidlo esiphundu sezinyama ezahlukene noma inhlanzi
Ngingakwazi yini ukuphuza amanzi ase-distilled?
I-Strudel enama-apula kusuka emanzini e-puff
Indlela yokugqoka ama-cuffs?
Ukuvimbela ukuqina kwe-atherosclerosis
I-Mucus emcibini - isimilo noma i-pathology?
Imiphi imikhiqizo equkethe i-selenium?
UPete Burns esemusha